हत्या Archives - जुनेली न्युज
१२ वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको पोष्टमार्टम रिपोर्ट : एकजना पक्राउ, हत्या गर्नेविरुद्ध प्रमाण बटुलिसकेका छौँ : प्रहरी
असोज ११, डडेल्धुरा । बझाङको मष्टा गाउँपालिका–२ की १२ वर्षीया सम्झना बिकको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलेको छ। जिल्ला अस्पताल बझाङमा गरिएको पोस्टमार्टमबाट बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रुपक खड्काले जानकारी दिए। जिल्ला अस्पतालले शनिबार साँझ प्रहरीलाई बुझाएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या भएको उल्लेख छ। यस्तै […]
तामाकोशी नदीमा हाम्फालेर थापा बेपत्ता : खोजी कार्य जारी
असोज ११, रामेछाप । रामेछापको मन्थलीमा तामाकोशी नदीमा हाम्फालेत एक जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा मन्थली नगरपालिका वडा नं २ टेकानपुरका स्थानीय अन्दाजी ५१/ ५२ वर्षीय (रामजी) भनिने शिवबहादुर थापा रहेका छन् । शनिबार उनी तामाकोशी नदीमा हाम्फालेर बेपत्ता भएका हुन् । शनिबार दिन भरी काम गरेर घर आएका उनी साँझघरयारी समस्याका कारण […]
माइतीघरमा बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिन माग
असोज १० काठमाडौं । एकपछि अर्को गर्दै निर्दोष बालिका, किशोरी र महिला लगातार बलात्कृत हुने तर अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय नपाएपछि त्यसको विरोधमा फाँसीको माग हुन थालेको छ । शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा बलात्कारविरुद्ध आवाज उठाउन भेला भएकाहरु मध्ये केहीले बलात्कारीलाई फाँसी नदिएसम्म अपराध नियन्त्रण नहुने धारणा राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । बझाङकी १२ […]
असोज ०९, काठमाडौं । बझाङको मष्टा गाउँपालिकामा १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । बुधबार साँझ गोठमा गाईवस्तुलाई घाँस हाल्न हिँडेकी एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको हो । मृत भेटिएकी बालिकाकाे योनिबाट रगत बगेको र सुरुवाल खाेलिएकाे थियाे । घटनाको जानकारीपश्चात् बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका डिएसपी रूपक खड्काको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । बालिकाको […]
प्रहरी हिरासतमै हत्या हिँसा भएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा बिरोध प्रदर्शन
भद्र ३०, काठमाडौँ | प्रहरी हिरासतमा हत्या गरिएका शम्भु सदा, विजय राम, रोशन विश्वकर्मा लगायत देशभर दलित समुदायमाथि भइरहेको हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा जातीय विभेदका विरुद्ध संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र नागरिक समाजले धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरेका छन् | प्रहरी हिरासतको क्रममा गरुडा नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने विजय राम (महरा) को […]
सुनापतिमा ११ वर्षीय बालिकाद्वरा आत्महत्या
भदौ २६, रामेछाप । रामेछापकाे सुनापति गाउपालिका वडा नं ३ मा ११ वर्षीय बालिकाले झुन्डिएर आत्महत्या गरेकि छिन्। स्थानीय आरुखर्क बस्ने कान्छा तामाङको ११ वर्षीय छाेेेरी मान्सि मुक्तानले घरमा कोहि नभएको बेलामा उनकै एक तले घरको, कोठाको दलिनमा पासाे लगाएर आत्महत्या गरेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख डिएसपी वसन्त पाठकले जानकारी दिए । सो […]
रौतहट घटना: ५ लाख दिएर मार्न लगाएको, प्रहरीको कुटपिटद्वारा मृत्युको आरोप: भिडियो सहित
जुनेली न्युज, रौतहट| रौतहट जिल्ला गरुडा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित सच फलफुल नर्सरीमा भएको निरन्जन रामको हत्याको घटनालाई लिएर प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भनि लगिएका सोही स्थानका अन्दाजी २० बर्षीय युवा बिजय रामको प्रहरीले जवरजस्त अपराध कबुल गराउन कुटपिट गर्दा हत्या भएको जानकारी आएको छ | झापा जिल्ला मेचिनगर नगरपालिका १२, चारआलीमा एथेलेटीक्सकी स्वर्ण पदक […]
साउन ३२, काठमाडौं‌ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १ सय ७२ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १२६, ललितपुरमा ३८ र भक्तपुरमा ८ जना संक्रमित भेटिएका हुन् । संक्रमित कुन ठाउँका हुन् भन्ने मन्त्रालयले खुलाएको छैन । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरमा ६४१ जना संक्रमित थपिएका छन् ।
रामेछापमा एक महिलाले झुण्डिएर आत्महत्या गरिन्
साउन २२ रामेछाप । रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नं ६ हात्तीटारमा एक महिलाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी छन् । गत बुधबार नारायण माझीकी २७ वर्षीय श्रीमती चमेली माझीले आफ्नै घरको भुइतलाको दलिनमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्याल रामेछापका प्रवक्ता टेकेन्द्र शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार, उनले के कारणले आत्महत्या गरेकी हुन् भन्ने खुल्न सकेको […]
उमाकुण्डमा एक महिलाले गरिन् झुण्डीएर आत्महत्या
साउन १३ रामेछाप । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ५ फातीमा एक महिलाले झुण्डिएर आत्महत्या गरिकी छन् । आत्महत्या गर्नेमा स्थानीय छत्र बहादुर तामाङकी आन्दाजी २२/२३ वर्षाकी श्रीमती बुधमाँया तामाङ रहेकी छन् । उनले गत सोमबार दिउँसो २० : ३० बजेको समयमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय उमाकुण्डले जनाकारी दिएको छ । उनको मृत्युको […]
पठाओका संस्थापक फहिम सलेह मृत भेटिए
३१ असार, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय राइड-शेयरिङ कम्पनी पठाओका संस्थापक फहिम सलेह सोमबार अमेरिकाको न्युयोर्कमा मृत फेला परेका छन् । उनको शरीर विखण्डित अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ । प्रहरीले आधिकारिकरुपमा केही बताएको छैन । सलेह संस्थापक रहेको अर्को कम्पनी गोकाडाले भने बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् उनको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । उनी गोकाडाका सीईओ […]
रुकुम घटनाको संसदीय विशेष समितिले बुझायो प्रतिवेदन, के निकाल्यो निष्कर्ष ? (निष्कर्षसहित)
जुनेली न्युज | गत जेठ १० गते भएको घटनाको छानबिन गठित संसदीय विशेष समितिले रुकुम चौरजहारी सोती घटना घट्नुपूर्व, घटना घटेको समय र घटनापश्चात अपनाउनुपर्ने अपराध अनुसन्धानको विधि प्रक्रियामा अपर्याप्तता एवं त्रुटि देखिएकोले घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ६ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भएको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा गत […]